အက်ဆေး | Nanyaaung's Blog
အက်ဆေး	GOOGLE FUN
Google မှာ home page ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသုံးဝင်လှတာ မဟုတ်ပေမဲ့ သဘောကျစရာပါ။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့။
•	google home page( google search , I’m feeling lucky) tabs လေးတွေပါတဲ့ page မှာ ( Google Gothic (or) Google Cheese (or) Google Loco ) လို့ရိုက်ထည့်‌ ပြီး I’m feeling lucky ကို နှိပ်ကြည့်ပါ ။ Home page ဆန်းဆန်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ (၃)မျိုး လုံးစမ်းကြည့်နော်။
•	ဒီဟုမ်းပေ့ခ်ျ က hacker တွေအတွက်ပေါ့ ။ http://www.google.com/intl/xx-hacker/
ကို ၀င်ကြည့်ပါ။မျက်စိတော့ ရှုပ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် G talk သုံးရင်း ရှာဖွေဖတ်ရှုမိတာလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြချင်လို့ဒါလေးကို blog တင်‌လိုက်‌တာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံဥာဏ်လေးများပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပရစေ။
၁။ “gtalk emotion shotcut”: သ်ိပြီးသူများပါလိမ့်မယ်။မသိသေးရင်‌တော့ သုံးကြည့်‌ပါဦး။ ။
1. All the Best – – :atb
2. Angel – O:-) – :angel
3. Angry – X-( – :angry
4. Applause – =D – :clap
5. Bath – – :bath
6. Batting eyelashes – ;;) –
7. Big Grin –😀 –
8. Blushing – : -B – :blush
9. Broken Heart – =(( –
10. Call me – :c – :callme
11. Confused – –
12. Cool – B-) – :cool
13. Crying – :(( – :waa
14. Day Dreaming – : -Y – :dream
15. Dislike – :PP – :naa
16. Do Not Disturb – – :dnd
17. Drooling – =P~ – :hee
18. Game – – :game
19. Ghoting – – :ghoting
20. Gud Morning – – :gm
21. Gud nite – – :gn
22. Heart – – :heart
23. Hi – : -h – :hi,hai
24. Hit – := –
25. Hug – – :hug
26. I am Mad – ~x( – :mad
27. I love you – – :ilu
28. I miss you – – :imu
29. Idea – – :idea
30. Kissing – : -* – :kiss
31. Laughing – :)) – :ha
32. Laughing – =)) – :haha
33. Love struck –😡 – :love
34. Mess – – :mess
35. Movie – – :movie
36. Nail bitting(Jealous)- :SS – :j
37. News – – :news
38. No – |-: – :no
39. No – – :no
40. Not talking – ]-( – :calm
41. Now – – :now
42. On Phone – :)] – :call
43. Pray – – :pray
44. Raised Eyebrow – /:) – :cha
45. sad –😦 –
46. Secret/Silent – : -$ – :shh
47. Shut Up – – :shutup
48. Sleep – – :sleep
49. Sleepy – I-) – :zz
50. smiling –🙂 –
51. Smug – – :mm
52. Sorry – – :sry
53. Stop shouting – : -T – :stop
54. Straight face –😐 –
55. Surprised – :O – :oh
56. Take care – – :tc
57. Thanks – – :thanx
58. Thinking – : -? –
59. Tongue –😛 –
60. Wait – =; – :wait
61. Waving, Bye – : -h – :bye
62. iWinking –😉 –
63. Worried – : -S – :wor
64. Yahooooo – ||-) – :yahoo
65. Yes – – :yes
၂။ “gtalk” တွင် စာရေးနေတုန်း အကြီးချဲ့ ကြည့်ချင်ရင် လုပ်နည်းလေး ကတော့ “ctrl +mouse wheel” ပါ။ အကြီးအသေး ကြိုက်သလို ချဲ့၊ချုံ နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး J ။ “cursor” ကို “gtalk box” ထဲချထားဖို့ တော့ မမေ့ နဲ့ ပေါ့ ။အော်…..ဒါပေမဲ့သင့်အတွက်ပဲ နော်။ Enter ခေါက်ပြီးတာနဲ့မူလအရွယ် ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။